About Poltava Okrainiana Medical & Dental Academy
MSA Sava lalana
MSA nifidy antsika
MSA hetsika fantatra
Zanaka ambony fampianarana
Visa vaovao zanany
About Okrainiana Medical & Dental Academy
Nitarika ny fitsaboana oniversite any Ukraine
Tongasoa eto amin'ny MSA
Poltava Okrainiana Medical & Dental Academy manana tantara tsara. Miasa bebe kokoa izahay dia 20 taona miaraka amin'ny mpianatra vahiny. Mpianatra iraisam-pirenena tia ny oniversite ary tia ny mpianatra. Eoropa avo kalitaon'ny fanabeazana no Vahaolana. Hoavy mamirapiratra miandry Fa ny androanay rehetra ireo mpianatra ho mpitsabo. Miaraha amin'ny fianakaviana iraisam-pirenena ny namana!
A tsara indrindra Anglisy Medical Studies /Poltava Okrainiana Medical Ary Dental Academy
Laharana 1 EOROPEANINA Malagasy MEDICAL NY FANABEAZANA University ao UKRAINE
Poltava Okrainiana Medical & Stomatological Academy ny fitsaboana tsara indrindra Fampianarana amin'ny teny Anglisy - A fampianarana ambony fanorenana ho an'ny fanofanana ny dokotera, anisan'izany ny mpitsabo nify. Nanomboka ny Academy ny hetsika in 1921 amin'ny sampam-pianarana an'i Kharkiv odontological Medical Academy. In 1967, ny Institute Nifindra tany an-tanànan'i Poltava sy anarana toy ny Poltava National State University Medical.
In 1994 Poltava University Medical Dental IV nahazo ny ambony indrindra fankatoavana sy ny haavon'ny toerana misy Okrainiana Medical Dental Academy. In 2004, IV fankatoavana ny haavon'ny dia noraisina ho mpikambana.
Amin'izao fotoana izao ny fianarana tao amin'ny Akademia ny 3615 mpianatra, 1400 amin'izy ireo - vahiny avy 42 firenena. Ny fampiasan-tena natao ao amin'ny nify, fitsaboana misaina, sampam-pianarana fanofanana olom-pirenena vahiny Faculty ny Graduate Fanabeazana sy ny sampan-draharaha ny fiofanana mialoha oniversite. Miorina amin'ny oniversite nanorina ny YMCA izay manomana undergraduate sy ny zandriny mpitsabo.
Ao amin'ny firafitry ny Akademia dia 56 departemanta, sivy amin'izy ireo - fanohanana. Medical-Advisory nanatanteraka ny asa teo amin'ny 35 pitsaboana sampana ao amin'ny Akademia, miorina ao amin'ny faritra sy ny tanàna tsara indrindra hopitaly Poltava.
Mampianatra ny Academy manam-pahaizana manokana ao amin'ny manaraka specialties:
1. Dentistry (7.110106 fanofanana fe-potoana 5 taona)
2. General Medicine (7.110101 fe-potoana fanofanana 6 taona)
3. Pediatrics (7.110104 fe-potoana fanofanana 6 taona)
4. Nursing (5.110102), ny fe-potoana fianarana 2, ny fototry ny fianarana ambaratonga faharoa
5. Solona Dentistry (5.110109), ny fe-potoana fianarana 2, ny fototry ny fianarana ambaratonga faharoa
Endriky ny fampiofanana ao amin'ny akademia andro sy ny tapa-potoana fanofanana eo amin'ny tolakandro (hariva kilasy).
Ny ara-tsiansa mety ny YMCA - 82 mpitsabo, 316 PhDs, 75 mpampianatra, 171 mpiara mpampianatra, 2 Nobel-panjakana loka, dia ny Okraina, 8 Voninahitra Scientist an'i Ukraine, 6 Voninahitra Doctor ny Ukraine. Nandritra ny folo taona farany, ny Academy nanao fiovana lehibe izay navela hiakatra any an-oniversite vaovao mifaninana ho fari-fampiofanana, mba hampiditra ny teknolojia mandroso indrindra fiofanana. Porofo izany no Akademia loka volafotsy sy varahina roa medaly amin'ny fampirantiana iraisam-pirenena ny toeram-pianarana "Modern fampianarana ao Okraina - 2001, 2002, 2004."Tamin'ny Jona 2003, ny Academy nandray anjara tamin'ny fandaharana ny fianarana ambony andrim-panjakana ny Okraina "Sophia ny Kyiv". Fa ny asa mavitrika amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana maoderina Okrainiana Medical Dental Academy no nahazo ny Diploma fandaharana ny fianarana ambony andrim-panjakana. Ao amin'ny sokajy "kalitaon'ny taonarivo fahatelo,"Akademia no nahazo ny volafotsy sy ny diplaoma tsangambato ny iraisam-pirenena Academic Rating" Golden Fortune " From 1999 ny 2009 tao amin'ny Academy namoaka over 710 fanabeazana ara-tsiansa isan-karazany soa ny lohahevitra. Tamin'ny taon-dasa nahazo 106 Patents an'i Ukraine sy Rosia. Ary nanangona ny fandaharana manana sekoly fito akademika: miasa fandidiana sy ny sarin Anatomy, ara-dalàna physiology, am-bava fandidiana, biolojika simia, aretina, Dentistry, pitsaboana ary fanafody andrana. Ukraine, amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny Firenena Mikambana sy ny UNESCO no anjara mavitrika eo amin'ny fanatanterahana ny fandaharan'asa iraisam-pirenena eo amin'ny sehatry ny fianarana ambony. Fanampiana ny firenena vahiny mba hanomana ny firenena mpiasa ara-pahasalamana sy Okrainiana Medical Dental Academy. Mba hanatsarana ny kalitaon'ny fiofanana ara-pitsaboana ny zom-pirenena vahiny tao amin'ny Akademia in 1992 amin'ny sampam-pianarana ny hiasa amin'ny mpianatra vahiny. Ary nianatra tao amin'ny Akademia 1400 vahiny avy amin'ny 42 firenena eto amin'izao tontolo izao (England,America,Irlandy,Meksika,Italia,Frantsa,Danemark, Albania,Armenia,Romania,Palestina, Irak, ,India,Kamerona,Kenya,Nizeria,Mongolia,Shina,Nepal,Iran, Syria, Maraoka, Alzeria,Jordania, Pakistan, Libya, Rosia, Turkmenistan, ary ny hafa). Izy ireo antoka rehetra ny zo sy ny fahafahana ao ny lalàna amin'izao fotoana izao ny Okraina. Fanofanana ny teratany vahiny natao araka ny fandaharam-pianarana sy ny fandaharan'asa ao amin'ny Minisiteran'ny Fanabeazana sy ny Siansa ary ny Ministeran'ny Fahasalamana any Ukraine. Amin'ny mpianatra iraisam-pirenena mitovy amin'ny mpianatra footing - olom-pirenena ao Okraina dia efitrano fianarana, ny efi-trano famakiam-boky sy ny famakiana, fanatanjahan-tena trano, Manasongadina izany koa ny faritra ho an'ny ara-kolontsaina, ara-pivavahana sy ny zava-mitranga saram fraternities. Ny dingana fianarana manokana ny mpampianatra dia manome fiofanana sy traikefa amin'ny niara-niasa tamin'ny teratany vahiny raha vao manomboka miaraka ny fampiofanana. rehefa nahazo diplaoma, mpianatra vahiny mahazo diplaoma ny fenitra iraisam-pirenena. In 1997. ao amin'ny biraon'ny mpiandraikitra noforonina ny fanomanana departemanta ho an'ny olom-pirenena vahiny. Mpianatra ao amin'ny Sampan-draharahan'ny fiomanana no mianatra teny Rosiana, fomba-teny siansa, Matematika, Fizìka, simia, Haiaina, informatika, jeografia. Amin'ny ankapobeny, ny asan 'ny fiomanana amin'ny mampifanaraka departemanta mikendry teratany vahiny ho velona sy hampiofana any Ukraine sy tsara ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao ny vahoaka Okrainiana. Fitomboan'ny fironana ho any amin'ny lahatsoratra hafa-nahazo diplaoma Akademia fanofanana amin'ny pitsaboana internship sy nahazo diplaoma sekoly. Ary ao amin'ny sampan-draharaha samihafa ao amin'ny pitsaboana hipetraka hanatsara ny fahaizany 42 vahiny - nahazo diplaoma mpitsabo nify sy fahaizanareo. Bebe kokoa izay efa vita vahiny honina sy maniry ny hanohy ny fianarany amin'ny nahazo diplaoma sekoly.
36024, Ukraine, Poltava, Shevchenko eny an-dalana,23
Poltava Okrainiana Medical & Dental Academy no mitarika ny fitsaboana anjerimanontolo in Ukraine. An-jatony ireo mpianatra vahiny tonga eto mba hianatra ny fitsaboana, Mbbs, levitra, fitaizana be antitra sy ny Dentistry isan-taona.
© 2016 Zo rehetra voatokana